Olee na-ejegharị Iji Norway Bụ A Dị Iche Iche Travel Ahụmahụ | Save A Train
Home > Travel Europe > Olee na-ejegharị Iji Norway Bụ A Dị Iche Iche Travel Ahụmahụ
Oge Ọgụgụ: 2 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 27/03/2020)
Ị na-achọ ịga leta Norway? Ọtụtụ ndị ọbịa na Europe chọta ụgbọ okporo ígwè eme njem a dara oké ọnụ ụtọ. Ị maara ihe mere? Nke a na-enye ohere Jiz os, na-ewere gị na dreamland of ata ụwa. Tụlee ebe ụfọdụ n'ime ihe ndị i kwesịrị ịma mgbe on a ụgbọ okporo-njem na Norway. Mgbe na-aga site ndị a nkọwa, ị nwere ike mfe ịchọta a Train ntinye akwụkwọ weebụsaịtị ịgbacha ihe.
okporo ígwè Agafee
okporo ígwè na-aga, dị ka ọtụtụ ná mba, nwere a bara uru Norway kwa (Mgbe ị na-eme njem n'elu 14 ụbọchị). Ọ bụ nnukwu azọpụta na ego ma na-enye n'ihu mma ka hop ụgbọ oloko na gị ọsọ, na oge. I nwere ike jiri ya tụnyere ndị na-eri n'ozuzu, na price nke a okporo ígwè ngafe, maka ọtụtụ ụbọchị ị na-atụ anya na-emefu na ụgbọ okporo ígwè. Ụfọdụ n'ime ụgbọ ala na ọbụna mmiri ụzọ gasị, na-ego ma ọ bụrụ na i nwere a okporo ígwè ngafe. Ị nwere ike ịlele maka ụgbọ ala na ụgbọ mmiri njikọ kpuchie a gafere njem gị ụzọ.
n'ozuzu, njem nleta chọta Single gbaa ụgbọ okporo ígwè nke ukwuu ihe ọma na-ekpuchi dum nke Norway. Ọ bụkwa dị ọnụ ala karịa ọtụtụ mgbe.
Ị nwere ike mkpa oche abụọ na ụfọdụ nke na-efu $ 5-20 n'ihi na ọtụtụ ogologo ụgbọ okporo ígwè agafe ma na-egosipụta ụgbọ oloko. ịkpọ a Train ntinye akwụkwọ weebụsaịtị na Europe, elele maka schedules nke abụọ dị ka ọ nwere ike ọgaghị adị n'èzí Europe. I nwekwara ike inweta onwe ma na-akọrọ sleepers, on n'abalị ụgbọ oloko with second-class rail passes.
E nweghị okporo ígwè ngafe na Norway na-ekpuchi ogologo na obosara nke okporo ígwè ụzọ gasị na mba. ma, ndị a gafee na-enye ego njem na a ole na ole na-ewu ewu ụgbọ ala na ụgbọ mmiri ụzọ gasị.
Norway na a nutshell njem
Nke a na njem na-ewe gị na sinik okporo ígwè-ụgbọ ala-ụgbọ mmiri-okporo ígwè na-aga inyocha Sognefjord, na ebe na Oslo-Bergen ụgbọ okporo ígwè akara. I nwere ike na-akpọ ya a ụgbọ okporo ígwè njem ngwugwu na Norway. E nwekwara ụfọdụ ebighi-relaxations na ị nwere ike ịlele ma ọ bụrụ na ị na-ejegharị ejegharị na ndị ezinụlọ na ụmụaka.
olileanya, a blog ga-mma kwadebe gị maka gị ọzọ Norway Njem.
Ejegharị ejegharị na-Norway ma ọ bụ n'ebe ọ bụla ọzọ na Europe? nke kacha mma website ka Order ụgbọ oloko tiketi bụ Save A Train
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/how-a-train-travel-to-norway-can-change-your-travel-experience/- (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / ja na / de ma ọ bụ / ru na ndị ọzọ asụsụ.